Andro maneran-tany ho an’ny Nofon-tany sy ny Tendrombohitra. – Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts
Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts > Actualite > Andro maneran-tany ho an’ny Nofon-tany sy ny Tendrombohitra.
Andro maneran-tany ho an’ny Nofon-tany sy ny Tendrombohitra.
Auteur: mamysd 27 novembre 2017
Iarahan-tsika mahita ny fiovaovan’ny toetr’andro izay mamotika sy manakorontana ny fiainantsika zanak’olombelona, indrindra ny firotsahan’ny tany hita eny amin’ny sahan-driaka sy ireo tendrombohitra rehetra eny izay tena manimba tokoa ny nofon-tany.
Etsy andaniny, ny hamafin’ny rivo-doza sy ny oram-baratra izay mahatonga ny fikahoan’ny nofon-tany ka mahatototra ny saha fambolena sy ireo faritra iva rehetra.
Ny fiakaran’ny mari-pana izay tsy lazaina intsony ka anisan’ny maha-maina ny nofo-tany ary misy fiantraikany amin’ny fihenan’ny vokatra ka miteraka tsy fahampian-tsakafo.
Manoloana izany rehetra izany dia andeha isika hiara-hikajy ny nofo-tany.
Anisan’ny iray amin’ireo hetsika rehetra efa natao ny fambolen-kazo ho fiarovana ny sahan-driaka antsoina hoe Nantsa ao amin’ny Distrkan’ny Soavinandriana, Kaominina Ambanivohitra Ampefy, Fokontany Ampefy.
Tao Ampefy no nisafidin’ny Minisiteran’ny Tontolo iainana, ny Haivoary ary ny Ala nankalazana amin’ny fomba ofisialy izany andro maneran-tany ho an’ny Nofon-tany izany. Ny filamatra noentina nanamarihana izany dia ny hoe: “MANOMBOKA AMIN’NY FIKOJAKOJANA NY NOFON-TANY AN-TENDROMBOHITRA NY FIKAJIANA NY PLANETA”.